तपाईंको सानो व्यापारको लागि उत्तम B2C CRM के हो? | Martech Zone
तपाईंको सानो व्यापारको लागि उत्तम B2C CRM के हो?
सोमवार, मे 4, 2020 मंगलवार, मे 5, 2020 डानिएला म्याकविकर
ग्राहक सम्बन्धहरू उनीहरूको स्थापनादेखि धेरै लामो यात्रामा आएका छन्। B2C (व्यवसाय लाई उपभोक्ता) मानसिकता पनि अन्तिम उत्पादन को सरासर वितरणको सट्टा एक अधिक UX- केंद्रित मानसिकतामा सरेको छ। तपाईंको व्यवसायको लागि सही ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन सफ्टवेयर छनौट गर्न कठिन हुन सक्छ।
अध्ययनका अनुसार 87 XNUMX% व्यवसायले सक्रिय रूपमा क्लाउड-आधारित CRM प्रयोग गर्दछ।
१ CR सीआरएम तथ्याistics्क तपाईलाई २०२० को लागि जान्नु आवश्यक छ (र पछाडि)
तपाईंको निपटानमा विकल्पहरूको अधिकताका साथ यो सहि छनौट गर्न अत्यधिक र तनावपूर्ण हुन सक्छ। आउनुहोस् हामी केहि उल्लेखनीय उदाहरणहरूमा हेर्नुहोस् र कसरी तपाईं आफ्नो सानो व्यवसायको आवश्यकताहरूको लागि सही उपकरण रोज्न सक्नुहुन्छ।
कसरी एक CRM छनौट गर्ने
हामी यसमा जानु भन्दा पहिले यो ढु important्गामा केही मापदण्डहरू राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। सबैभन्दा पहिले, कुनै दुई सीआरएम उपकरणहरू एक समान छैनन् - प्रत्येकसँग आफ्नै विकल्पहरूको सेट छ।
सहि छनौट प्रायः कम्पनीको छेउबाट आत्म-प्रतिबिम्ब मार्फत गरिन्छ, मुख्यतया यो तपाईंलाई आवश्यक परेको बारेमा। जबकि केही कम्पनीहरूले बिक्रीलाई प्राथमिकता दिन्छन्, अरूले अधिक विस्तृत ट्र्याकि and र विश्लेषण रुचाउँदछन्। सही CRM ले तपाइँको सामग्री मार्केटिंग रणनीतिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, तपाइँलाई सक्षम पार्न कुन सामग्रीको प्रकारले अधिक लिडहरू उत्पन्न गर्दछ भनेर देखाउँदै। हामी केहि प्रश्नहरू हेरौं जुन तपाईंलाई तपाईंको व्यवसायको लागि उत्तम CRM निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ:
तपाईंको व्यवसायको आकार
तपाईंको व्यवसाय कति ठूलो छ?
के तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय वा घरेलु काम गर्नुहुन्छ?
तपाईसँग कति जना स्टाफ सदस्य छन् र तपाई विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ?
तपाईं दैनिक डेटामा कति डाटा प्रशोधन गर्नुहुन्छ र यो विस्तार हुँदैछ?
तपाईंको व्यवसायको टेक्निकल कार्यक्षमता
तपाईको पेरोलमा तपाईसँग कस्तो प्रकारका पेशेवरहरू छन्?
के तपाइँसँग डेटा विश्लेषकहरू र विक्रेताहरू उपलब्ध छन्?
तपाइँको ग्राहक समर्थन र बिक्री प्रक्रिया कसरी स्वचालित छन्?
तपाईंको व्यवसायको प्राथमिकताहरू
तपाईंको प्राथमिकताहरू के हुन् जब यो ग्राहकहरूको सन्तुष्टि आउँछ?
तपाईं मार्केटिंग र विज्ञापनमा कति लगानी गर्नुहुन्छ?
तपाईको कार्यप्रवाह कती सुव्यवस्थित छ र कुनै बाधा छन्?
Owners 55% व्यवसाय मालिकहरू सबै भन्दा माथि आफ्नो सीआरएममा प्रयोग गर्न सजिलोको लागि सोध्छन्।
१२ अचम्मको सीआरएम चार्टहरू तपाइँ मिस गर्न चाहनुहुन्न
एकचोटि तपाईले यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिइसक्नु भएपछि तपाईसँग चाहिने कुराको एक स्पष्ट र अधिक वस्तुगत तस्बिर हुनुहुनेछ। यो गलत हिसाब गर्न सजिलो छ र एक CRM छनौट गर्नुहोस् जुन तपाइँलाई उपयुक्त छैन, केवल पछि ब्याकप्याल्डमा फरक पछि। अब जब हामीसँग सही सीआरएम छनौट गर्ने स्पष्ट समझ छ, अब हामी सबैभन्दा उल्लेखनीय उदाहरणहरू हेरौं।
यदि तपाईं राम्रो व्यवस्थापन र तालिका सीआरएम खोज्दै हुनुहुन्छ भने, फुर्ती सीआरएम तपाईंले कभर गर्नुभयो। उपकरणले स्वचालन र सम्पर्क व्यवस्थापन विकल्पहरूको अधिकता समेट्दछ जुन तपाईंको ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनलाई पत्रमा सुचारू गर्न सक्दछ।
यो विशेष रूपले दिमागमा साना व्यवसायहरूको साथ डिजाइन गरिएको थियो र यसमा केही ठूला उद्यम विकल्पहरू छैनन् जुन तपाईं सामान्यतया CRM मा पाउनुहुने थियो। यद्यपि, फुर्ति सीआरएम प्लगइनहरू र विजेटहरूको लागि पूर्ण समर्थनको साथ आउँदछ जसको मतलब तपाईले यसलाई 'अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको व्यवसायको आवश्यकतालाई पूर्णरूपमा फिट गर्न सक्नुहुन्छ।
फुर्ती सीआरएम भ्रमण गर्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको व्यवसायको लागि बिक्री केन्द्रित CRM खोज्दै हुनुहुन्छ भने, Pipedrive भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस्। सेवा विशेष रूपमा सेन्टरमा बिक्री स्ट्रिमलाइंगको साथ डिजाइन गरिएको हो, यसको मतलब यो बिक्री-विशिष्ट विकल्पहरूको एक समूहको साथ खचाखच आउँछ।
चलाक ईन्टरफेस डिजाइन र ड्र्याग एण्ड ड्रप UI ले तपाइँको टीमसँग काम गर्न छिटो र भरपर्दो प्लेटफर्म छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ। Pipedrive ले ईमेल एकीकरणको लागि अनुमति दिन्छ जसको अर्थ हो कि तपाईंको बिक्री टोलीले बिभिन्न ट्याबहरूको साथ मल्टिटास्क गर्नु पर्दैन र केवल तिनीहरूको काम गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
कपर (औपचारिक रूपमा प्रोस्परवर्क्स) पूर्ण गुगल सूट एकीकरणको साथ एक सीआरएम हो। यसको मतलब यो हो कि सेवा गुगलमा फेला परेका सबै अनुप्रयोगहरू र उपकरणहरूसँग उपयुक्त छ, ड्राइभ, पानाहरू र कागजातहरू सहित।
के अन्य CRMs बाट कपर अलग जो एक सेवा मा एकीकृत आउँछ VoIP संगतता हो।
Amari Mellor, वरिष्ठ ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को लागी Grabmyessay
यसले तपाईंको बिक्री प्रबन्धकहरू र ग्राहक समर्थनलाई कलरहरू र तेस्रो पक्षहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न मद्दत गर्दछ उपकरण बिना नै बाहिर। यसले पछि विश्लेषणको लागि भ्वाईस च्याट रेकर्ड गर्दछ र भण्डार गर्दछ र तपाईंलाई सीधा गुगल मार्फत महत्त्वपूर्ण डाटा भण्डारण गर्न र परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ। कपर त्यहाँ बाहिरका अधिक फिचर-पूर्ण सीआरएमहरू मध्ये एक हो र स्थायी सीआरएम समाधान खोज्ने प्रायः साना व्यवसायहरूका लागि राम्रो फिट हो।
कपरको भ्रमण गर्नुहोस्
बजारमा सब भन्दा सस्तो CRM को रूपमा, HubSpot hype सम्म बाँच्दछ। सुरुआत र सानो व्यवसायका लागि डिस्टेलस्टर बजेटको साथ यो वास्तविक विकल्प हो। यसले पूर्ण ग्राहक प्रबन्धन र डाटा विश्लेषण, साथै सीआरएम भित्र जीमेल एकीकरणको लागि अनुमति दिन्छ। सबै भन्दा उत्तम, हबस्पटले तपाईले प्रयोग गर्ने विकल्पहरू र तपाइँले छनौट गर्नुभएको प्याकेजको आधारमा मूल्य समायोजन गर्दछ।
थोरै चीजहरू जुन तपाईं सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, कम तपाईंले महिनाको अन्त्यमा तिर्नुहुनेछ। हबस्पट कुनै उन्नत विकल्पहरू उपलब्ध बिना डाटा ट्र्याकिंग र ग्राहक व्यवस्थापनको लागि एक उत्तम प्लेटफर्म हो। यद्यपि यो मामूली नकारात्मक पक्ष हो किनकि धेरै जसो उन्नत ट्र्याकि and र विश्लेषण विकल्पहरू साना र बढ्दो व्यवसायहरूको लागि केही अनावश्यक हुन्छन्।
यदि १० प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्रतिबन्ध तपाईंको लागि मुद्दा साबित भएन, भने जोहो तपाईंको व्यवसायको लागि उत्तम सीआरएम हुन सक्छ। धेरै उन्नत सीआरएमहरूको कोर प्रकार्यताका साथ जोहो एक नि: शुल्क सीआरएम हो। यसले ग्राहक व्यवस्थापन, विश्लेषण र on-सेवा UI मार्फत समर्थनका लागि अनुमति दिन्छ।
जोहो विक्रेताहरूलाई दिमागमा राखिन्छ र यसले गेमिफिकेशन क्षमताहरू प्रस्तुत गर्दछ। यसको मतलव तपाईको बिक्री टोलीले स्टार्टअपमा प्रतिस्पर्धी माहौल सिर्जना गर्न सक्दछ र एक अर्काको भलाईको लागि काम गर्दछ। Zoho एक अधिक मासिक शुल्क मा अधिक उन्नत क्षमता र एक विस्तारित उपयोगकर्ता रोस्टर प्रदान गर्दछ। यद्यपि, प्राय जसो साना व्यवसाय र सुरूवातहरूले बहुमुखी प्रतिभा र कार्यक्षमता नि: शुल्क संस्करणमा फेला पार्नेछन्।
Zoho भ्रमण गर्नुहोस्
अन्तमा, यदि डेटा व्यवस्थापन र ग्राहक ट्र्याकिंग केहि चीज हो जुन तपाईंलाई सख्त चाहिन्छ, Highrise ले तपाईंको लागि कभर गर्नेछ। सेवा क्लाउड-आधारित डाटा भण्डारण दिमागमा निर्माण गरिएको थियो, यसको मतलब प्रत्येक ग्राहकको अन्तर्क्रिया सुरक्षित रूपमा सीआरएममा भण्डारण गरिएको छ।
Highrise धेरै त्यस्तै तरिकाले काम गर्दछ प्रोजेक्ट ब्यवस्थापन उपकरणहरू र व्यक्तिगत नोटबुकमा, तर CRM ट्विस्टको साथ। यसको मतलब यो हो कि इन्टरफेस सफा र सजिलैसँग ग्रिप्समा आउन सक्दछ। तपाईले इ-मेल सूचीहरू प्रबन्धन गर्न सक्नुहुनेछ र मेल स्वचालन सेवाहरूको सहारा बिना नै Highrise मार्फत तपाइँका ग्राहकहरूलाई सन्देशहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ आफ्नो व्यवसायको लागि डेटा व्यवस्थापन र ट्र्याकिंग उपकरणको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, हाइराइज भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस्।
Highrise मा जानुहोस्
तपाईंको सीआरएम तपाईंको उपभोक्ताहरूको लागि हो
तपाईंको सीआरएम सफ्टवेयर छनौट गर्दा तपाईंको ग्राहकहरू र आपसी कुराकानीको बारेमा सोच्नुहोस्। तपाईले अहिले सामना गरिरहनु भएका कठिनाइ के हो र कम गर्न चाहानुहुन्छ? यो साधारण प्रश्न कहिलेकाँही सबै पहल हुन सक्छ तपाइँ सीआरएम समाधानमा लगानी गर्न आवश्यक छ।
M 74% सीआरएम प्रयोगकर्ताहरूले भने कि सीआरएममा लगानी गरेपछि उनीहरूसँग ग्राहक डेटामा थप विस्तृत पहुँच थियो।
CRM सफ्टवेयर प्रयोगकर्ता दृश्य
त्यहाँ यति धेरै सुविधाहरू भएको र किफायती समाधानको साथ म्यान्युअल तरिकाले ग्राहक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छैन। विश्वासको लीप लिनुहोस् र यदि तपाईंको अवस्थित कार्यप्रवाह मिल्दछ भने नयाँ उपकरण प्रयास गर्नुहोस्। तपाई नतिजाको साथ हैरान हुन सक्नुहुन्छ।
टैग: फुर्तिलो सीआरएमव्यवसाय उपभोक्तालाईBusiness2 उपभोक्तातामासीआरएमजीमेलगुगल सूटHighriseकसरीकसरी एक crm छनौट गर्ने
डानिएला म्याकविकर एक ब्लगर र स्वतन्त्र लेखक हो जसले B2B र B2C व्यवसायसँग ब्लग लेखन, प्रतिलिपि अधिकार, र घोस्टराइटिंग सेवाहरू प्रदान गर्ने काम गर्दछ। हाल, उनी यसमा योगदान गर्छिन् Topwriters समीक्षा। जब डानिएला लेखिरहेकी छैनन्, उनी यात्रा गर्न, रोमान्स र विज्ञान कथा पढ्न र नयाँ मदिरा प्रयोग गर्न मन पराउँछिन्।
COVID-19: उपभोक्ताहरू र #StayAtHome खरीद तथ्या .्क
COVID-19: कोरोना महामारी र सामाजिक मीडिया